VIRURL: Mawduucyada La kafaala qaaday iyo Wadaagista Bulshada ee Lacagta leh | Martech Zone
VIRURL: Mawduucyada La kafaala qaaday iyo Wadaagista Bulshada ee Lacag Bixinta ah
Axad, Nofeembar, 25, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan bixinaa qayb ka mid ah qaybinta iyo bixinta xayeysiisyada banaanka iyo wixii ka dambeeya. Waa muhiim in waxyaabahayaga la horkeeno dhagaystayaal badan - waxaanan ogaanay in meelaynta tayada sare leh ay na siinayso xoogaa cajaa'ib leh, booqdayaal ku habboon oo hareeraha taagan. Markay Facebook kor u qaaddo dhiirrigelinta lacag bixinta, Google wuxuu sii wadaa inuu yareeyo hantida maguuraanka ah, iyo matoorada raadinta waxay sii wadaan inay la dagaallamaan xeeladaha xirfadleyda SEO ee khiyaameeya, bixiyeyaasha wax ka qoraya ayaa loo wajihi doonaa inay si fudud u bixiyaan inay ku ciyaaraan waxyaabo kale oo aad u yar.
Waa niyad jab aniga inaan sidaas dhaho. Waxaan jeclahay dimoqraadiyeynta internetka iyo awoodeeda inay natiijo u soo saarto wiilka yar ee aan awoodi karin inuu madax la aado tartan weyn. Maanta, wali waa suurtogal in shirkad yar ay ka dhigto mid weyn oo khadka tooska ah ah - laakiin maaddaama guryaha Internetku ay u muuqdaan inay lacag ka helayaan fursad kasta, fursadahaasi way sii yaraanayaan, tanna kor u qaadista fursadaha dhiirrigelinta ah ayaa kor u kacaya.
VIRURL waa xoogaa istiraatiijiyad duwan. Halkii aad ka bixin laheyd ilahaan si kor loogu qaado macluumaadkaaga, VIRURL waxay ku darsaneysaa fursad saameeyayaasha bulshada in lacag lagu siiyo si ay ula wadaagaan xiriirada shabakadooda.
VIRURL waxay ku baahisaa maqaallada iyo fiidiyowyada la kafaala qaaday shabakadda iyadoo loo marayo bogagga internetka ee caanka ah iyo dadka saamaynta leh. Barxaddeena isxilqaan waxay u oggolaanaysaa soo saarayaasha warbaahinta internetka inay ku abuuraan ololeyaal xayeysiis dalxiis arrimo qasabno. Xayeysiisyada VIRURL waxaa lagu soo koobay shabakadeena ballaadhan ee sii kordheysa ee daabacayaasha degellada iyo saamileyaasha warbaahinta bulshada, iyadoo loo ballaadhinayo waxyaabaha ay iskaashigu ka kooban yihiin malaayiin dad ah oo aad ugu hawlan.
VIRURL Waxyaabaha la kafaala qaaday waxaa lagu mideeyay laba koox oo adeegsadeyaal ah:
Daabacayaasha websaydhka, ee martigaliya widget-ka VIRURL ee boggooda si ay ugu adeegaan dhagaystayaashooda waxyaabaha ku habboon ee kafaala qaadaya ee shabakadda VIRURL.
Saameeyayaasha bulshada, ee la wadaagaya xiriiriyeyaasha VIRURL kuwa raacsan warbaahinta bulshada ee u heellan iyo akhristayaasha baloogyada. VIRURL waxay sheeganeysaa inay leedahay 110,000 saamileyaal ah oo laqortey.
Xusuusin: Waxaan tijaabineynaa VIRURL waxaanna uga faa'iideysanay iskuxiraheenna 'Sponsored Link' boostadan.
Tags: lacag bixisaybixi retweetsqaybsiga la bixiyayaragtiyada la bixiyayvirurl
Kudar Goob-Meel Nidaam Maareyn Mawduuc kasta
Talaabada Koowaad ee Ganacsiga Bulshada: daahfurid
Nov 25, 2012 saacadu markay tahay 11:26 PM
Waad ku mahadsantahay hordhacaaga VIRURL.